အလှတရား | ဇွန်လ 2021
နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောနှုတ်ခမ်းများကိုအားလုံးနှစ်သက်ကြသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာခဏအမှောင်နှင့်ခြောက်သွေ့သောနှုတ်ခမ်းများ၏ပြfaceနာရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ထိုအရာကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်သင်ပိုမိုချောမွေ့။ လှပသောနှုတ်ခမ်းကိုကူညီနိုင်မည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်များနှင့်ကုထုံးအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အတူတကွစုစည်းထားရှိပါသည်။
နဂါး၊ ပျားရည်၊ Rosewater၊ ကြက်သွန်ဖျော်ရည်၊ ပင်စိမ်း၊ အရွက်၊ လာဗင်ဒါမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ၊ လက်ဖက်ပင်များဆီကဲ့သို့သောသဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ခေါင်းကိုက်စွာအသုံးပြုသည့်အခါမျက်နှာဆံပင်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကူညီသည်။
အဆီပြန်အရေပြားအတွက် Aloe Vera Face Packs 10 ခု
aloe vera gel ကိုပျားရည်၊ သံလွင်ဆီ၊ multani mitti, besan, rosewater, သခွားသီး, oatmeal, sandalwood အမှုန့်, ​​glycerin ကဲ့သို့သောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်။ အဆီပြန်သောအသားအရေအတွက်အိမ်မျက်နှာမျက်နှာပြင်များပြုလုပ်ပါ။
သင်၏နှုတ်ခမ်းအထက်ပိုင်းဆံပင်ကိုဖယ်ရှားရန်နာကျင်မှုကင်းသည့်နည်းလမ်းရှာနေပါသလား။ ဒီမှာရှစ်ရှိပါတယ်! အထက်နှုတ်ခမ်းဆံပင်ကိုသဘာဝကျကျဖယ်ရှားပစ်ရန်ဤအိမ်ကုထုံးများကိုစစ်ဆေးပါ။
လက်သည်းများပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အိမ်သုံးဆေးများ ၅ ။
သငျသညျငြီးငွေ့ပြီးတိုတိုသို့မဟုတ်ပျက်စီးလွယ်သောလက်သည်းများကိုစိုးရိမ်လျှင်ငှက်ပျောသီး၊ ကြက်ဥ၊ ငါးဆီ၊ ထောပတ်သီး၊ ကီဝီ၊ ပျားရည်၊ နို့၊ လိမ္မော်နှင့်လိမ္မော်များကဲ့သို့သောသဘာဝကုထုံးများကိုသုံးပါ။ ဤပါဝင်ပစ္စည်းများသည်သင်၏လက်သည်းများကိုကျန်းမာစေပြီးပိုမိုမြန်ဆန်သောလက်သည်းတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
သင်၏အသားအရေကိုညအိပ်ညက်စေသည့်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေနေပါသလား။ ဤဆောင်းပါးသည်သင်၏မှိုင်းနေသည့်အသားအရေကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေရန်နှင့်၎င်း၏အရောင်တောက်ပမှုကိုမြှင့်တင်ရန်အထောက်အကူပြုမည့်ကြိုးစားပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့်လှည့်ကွက်အချို့ကိုလေ့လာထားသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
တောင်ပိုင်းအိန္ဒိယသတို့သမီးဆံပင်ပုံစံများကျွန်တော်လုံးဝပြီးနောက် Drooling ကြသည်!
ဤဆောင်းပါးတွင်စာရင်းပြုစုထားသောအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းသတို့သမီးဆံပင်ပုံစံများဖြစ်သည်။ ကြည့်ပါ ဦး
ကြက်ဥနှင့်သံလွင်ဆီမျက်နှာဖုံး၊ နို့နှင့်ပျားရည်မျက်နှာဖုံး၊ ငှက်ပျောသီးနှင့် Papaya mask ကဲ့သို့သောအိမ်သုံးကုထုံးများသည်ဆံပင်ကိုသဘာဝကျစေရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ထွန်းလင်းသောအသားအရေအတွက်စပါးမျက်နှာမျက်နှာဖုံး ၁၁ ခု
ရှေးခေတ်ကကတည်းကအရေပြားကိုလင်းစေပြီးတောက်ပစေရန်အတွက်ဆန်မုန့်ညက်သုံးခြင်းသည်သင့်အသားအရေကိုအာဟာရဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤတွင်တောက်ပသောအသားအရေရရှိရန်ဆန်မှုန့်ကိုအသုံးပြုရန်နည်းလမ်း (၁၁) ခုရှိသည်။
သင် RN ကိုသိရန်လိုအပ်သောအမြဲတမ်းဆံပင်ကိုဖြောင့်ပြီးနောက် Do's နှင့် Don'ts
ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဆံပင်ပုံစံသည်ကြည့်ရှုရန်အားရစရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင့်အားအိပ်မောကျသည့်ညများပေးနိုင်ပြီးနောက်မှစောင့်ရှောက်မှုမှာအရေးကြီးသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ဤအကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပြီးဆံပင်ဖြောင့်ပြီးနောက်မည်သည့်အရာနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများသည်အတိအကျကိုသင့်အားပြောပြသည်။
ဤကုစားနည်းကို သုံး၍ Tan ကိုလက်ဖြင့်ဖယ်ရှားပါ
သင်၏လက်များကိုဂရုပြုရာတွင်သင်၏အချိန်မည်မျှကြာပြီနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာပေါ်ရှိအရေပြားမည်သို့ပေါ်လာမည်ကိုစိုးရိမ်ကြသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်များပေါ်တွင်အရေပြားကိုလျစ်လျူရှုထားသည်။ ဒီ tan ကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်တဲ့ဒီ tan-ဖယ်ရှားတဲ့ကုစားနည်းတွေကိုစမ်းကြည့်ပါ။
ပါးစပ်ပတ် ၀ န်းကျင်မှောင်မိုက်သောအသားအရေသို့မဟုတ်သံကွင်းများကိုသံပုရာ၊ အုန်းဆီ၊ ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ရည်၊ အာလူး၊ သံလွင်ဆီစသည်တို့ကို အသုံးပြု၍ ကုသနိုင်သည်။ ဤကုစားနည်းများကိုပါးစပ်ပတ် ၀ န်းကျင်အရေပြားအရောင်ခြယ်မှုများကိုပုံမှန်အသုံးပြုပါ။
အသားအရေခြောက်သွေ့ရန်အတွက် Rosewater Face Packs ၁၀ ခု
ပျားရည်၊ ဒိန်ချဉ်၊ multani mitti စသည့်အမျိုးမျိုးသောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ရောနှောခြင်းအားဖြင့်ရေချိုကိုအသုံးပြုပြီးအိမ်လုပ်မျက်နှာဖုံးများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
သဘာဝနည်းလမ်းများ သုံး၍ Nipple ဆံပင်ကိုအမြဲတမ်းဖယ်ရှားနည်း
နို့သီးခေါင်းများသည်ပုံမှန်မဟုတ်သော်လည်းပုံမှန်မဟုတ်သောအရာမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သူတို့ကသင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးရင်၊ အိမ်မှာအမြဲတမ်းနို့သီးခေါင်းတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်တဲ့သဘာဝ၊
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း maggi ကိုစားခြင်းသည်ဘေးကင်းပါသည်